मालिश - यो उपयोगी र रमाइलो दुवै छ। आजकल त्यहाँ शायद यसको स्वस्थ गुण शङ्का गर्ने एक मान्छे हो। आखिर, र हजारौं वर्ष परीक्षण मालिश को निको शक्ति अब सबैले उपलब्ध छ। ध्यान केन्द्रित गर्न वा मालिश को प्रभाव विस्तार गर्न एउटा तरिका मालिश तेल को व्यवहार मा प्रयोग हो। समय अतिप्राचीन देखि, मानिस प्रयोग तेल आवश्यकता को एक किसिम को लागि। उदाहरणका लागि, ग्रीस मा मालिश तेल Olympians लागि आवश्यक थियो।
आधारभूत र सक्रिय
सबै तेल आराम, विरोधी-सेल्युलाईट, मृदुकरण, ठंडा, आदि सबै, शरीर :. वार्मिंग मा एक विशिष्ट प्रभाव मालिश तेल दुई मुख्य समूह विभाजित छन्: मूल र सक्रिय (पनि आवश्यक भनिन्छ)। आधारभूत मालिश तेल राम्रो स्लाइड Palms masseur प्रदान गर्नुपर्छ। यी तेल बहु-घटक र एक-घटक संरचना हुन सक्छ। साथै, आधार तेल , नरम moisturize र छाला rejuvenate। जैतून, आरु, सूर्यमुखी तेल, खूबानी: यस्तो तेल को उदाहरण।
आधारभूत सानो खनिज, प्राकृतिक वा मिश्रण तत्संबंधी हुन सक्छ। खनिज तेल उत्कृष्ट कागज व्यावहारिक छाला मा अवशोषित छैन प्रदान गर्दछ। तर यसको आवेदन प्रकट अतिरिक्त छाला फिलिम मा धेरै सुखद अनुभूति छैन जब। उच्च शुद्धता को अब साधारण बाल्यकाल खनिज तेल। यो तेल - viscous छैन, अपेक्षाकृत तरल पूर्ण चिस्यान कायम रहन्छ र कोड मखमल बनाउँछ। प्राकृतिक (तरकारी) तेल सानना गर्दा जो आवश्यक छ, धेरै राम्रो अवशोषित छ। यी तेल फैटी एसिड (oleic, linoleic, palmitic, Stearic) र आवश्यक भिटामिन र एंटीओक्सिडेंट को परिसर संतृप्त छन्। हाल यस्तो तिल, जैतून, अंगूर, खूबानी, जस्तै सबै भन्दा साधारण हर्बल मसाज तेल jojoba तेल र कोका।
सक्रिय तेल कार्यात्मक लोड यसलाई बोक्न र शरीर मा एक प्रभाव। मालिश र एरोमाथेरापी मा प्रयोगको - एक वास्तविक विज्ञान र प्राचीन कला। प्रत्येक आवश्यक तेल मालिश मन र मानव शरीर दुवै को प्रभाव विभिन्न पक्षहरू धेरै छन्। कहिलेकाहीं एक वा अर्को संयोजन प्रभावशाली र आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया achieves। आयुर्वेदिक वर्गीकरण लागि सबै तेल चिसो (chamomile, विभाजित छन् पुदिना), तातो (thyme), सुखाने (पाइन, सिट्रस फल), मइस्चराइजर (गुलाबी)। लगभग सबै आवश्यक तेल विस्तार अध्ययन र तिनीहरूको सही विशिष्टीकरण र आवेदन गर्न ज्ञान को धेरै संचित छन्। तथापि, masseurs मालिश सबै लाभ शून्य कम जो एलर्जी प्रतिक्रिया, को संभावना बारे मा भूल छैन।
मालिश तेल कहाँ किन्न र के हेर्न?
मालिश तेल साथै किनेको गर्न सकिन्छ खुद्रा पसलहरुमा र इन्टरनेटमा। एकै समयमा तेल को प्याकेजिङ्ग र स्थिरता म्याद समाप्त हुने मिति ध्यान। यो स्पष्ट बादल छैन हुनुपर्छ र कुनै पनि अशुद्धताओं (केही तेल एक अपवाद हो, तर यो सामान्यतया लेबल मा लेखिएको छ) समावेश गर्दैन।
कसरी मालिश तेल तयार?
आधार तेल (जस्तै तेल, परिष्कृत छैन रूपमा), तपाईं एउटा सक्रिय, तीस milliliters पन्ध्र घटेको आधारित थप्नु पर्छ। यो रकम लागि पर्याप्त हुनुपर्छ सामान्य मालिश सारा शरीर। तयार बनाएको मालिश तेल त तपाईं एक गाढा ग्लास कन्टेनर मा खन्याउन गर्न आवश्यक छ। र मालिश समयमा सर्वश्रेष्ठ एक सुविधाजनक कवर संग प्लास्टिक बोतल प्रयोग छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा मसाज लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक को एक - यो मालिश तेल। जहाँ यो किन्न, तपाईं पहिले नै थाहा छ। यो मालिश कसरी गर्न सिक्न मात्र रहनेछ। यो तेल सबै प्रक्रियाहरु मा प्रयोग गरिएको छैन भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि यसको संयोजी मालिश प्रयोग गरिएको छैन।
कसरी पेडीक्योर आफैलाई कटौती गर्न?
Transdermal प्रत्यारोपण: यो के हो र तपाईं आभूषण यस प्रकारको बारेमा जान्नु आवश्यक छ के?
Kuchugury: सबै भन्दा राम्रो बाँकी होटल
कसरी टेप देखि इस्टर अन्डा बनाउने?
स्याउ जाम: नुस्खा appetizing preform
फिल्म "प्रहरी सर्जन्ट": अभिनेता दुष्ट भन्दा राम्रो को विजय देखाए
रूसी सन्दर्भ के राम्रो हिउँ टायर? 2013 मा सबै भन्दा राम्रो मोडेल को समीक्षा
रूपमा हेमोग्लोबिन कम गर्न सकिन्छ